ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီ - mum မှာကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်
ကျွန်တော်တို့၏ ထူးခြားတဲ့ငွေပေးချေမှုရမည့်အစီအစဉ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများအစီအစဉ်ကို Join သည်လွယ်ကူစေသည်
အဖြစ်အနည်းငယ်သာအဖြစ် $ 3,000 များအတွက်အစီအစဉ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ
တစ်ဦးကနိမ့်ကနဦးငွေပေးချေမှုရမည့်သင် Start ဖို့လိုအားလုံးဖြစ်ပါတယ်
အဆိုပါအစီအစဉ် entry $ 3,000 မှာစတင်သည်။
US မှာအဘယ်သူမျှမကအခြားတက္ကသိုလ်ကဒီအနိမ့် entry ကိုအခကြေးငွေပေးထားပါတယ်။ သင့်ရဲ့အလုပ်သင်ကာလအတွင်းသင့်ရဲ့ဝင်ငွေရရှိမှုအနေဖြင့်ကျန်ရှိနေသေးသောကျူရှင်ပိတ်ထားပေးဆောင်။
ကျန်ရှိသောပရိုဂရမျကုန်ကျစရိတ်သော '' ကျောင်းသားချေးငွေ '' ကတဆင့်ပေးဆောင်ပါလိမ့်မည် သငျသညျစီစဉ်နိုင်ပါလိမ့်မည် သင်တစ်ဦးပေးဆောင်အလုပ်သင်အနေအထားကိုလက်ခံရယူအပြီး။
ကျူရှင်ပါဝင်သော $ 41,000, ကျောင်းဝင်းအိုးအိမ်, အစားအသောက်နှင့်ကျန်းမာရေးအာမခံ - စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ် $ 44,000 ဖြစ်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ Paid Internship ကာလအတွင်းချေးငွေဆပျ
လေ့ကျင့်ရေး Intern များကိုများအတွက်ပျမ်းမျှစတင်လစာလက်ရှိတွင်ကျောင်းသားချေးငွေပြန်ဆပ်ဖို့တွေအတွက်အလွန်တတ်နိုင်စေသည်ရာတစ်နှစ်လျှင် $ 80,000 ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပုံမှန်ပြန်ဆပ်ပမာဏတစ်လလျှင် $ 1,600 ဖြစ်ကြသည်။
သင်ရိုးလက်တွေ့သင်တန်း (CPT) တွင်အလုပ်လုပ်နေသောကျောင်းသားများချေးငွေပေးချေမှုတစ်ခုတတ်နိုင်ဘတ်ဂျက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်၎င်းတို့၏လူနေမှုကုန်ကျစရိတ်ပေးဆောင်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ပြီးနောက်-အခွန်ဝင်ငွေအားဖြင့်ပေးဆောင်နိုင်ရှာပါ။ အဆိုပါ CPT အလုပ်သင်လုပ်နေစဉ်ကျောင်းသားများအတွက်လည်းငွေစုစုပြုံရန်အဘို့အဒါဟာဘုံဖြစ်ပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားအဘယ်သူမျှမ Co-လက်မှတ်ထိုးသူရှိပါတယ်လျှင်သင်ကျောင်းအပ်အပေါ်သို့ကျိုးနွံငွေပမာဏကိုပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ လိုအပ်သောငွေပမာဏကိုသငျသညျအရည်အချင်းပြည့်မှီသောဘဏ္ဍာရေးအကူအညီများ၏အဆင့်အပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ program ကိုကုန်ကျစရိတ်၏ချိန်ခွင်လျှာထို့နောက်ကွန်ပျူတာပညာရှင်များချေးငွေကတဆင့်ပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။
mum တစ်ဦးနှင့်အတူဘဏ်ချေးငွေ၏အာမခံဖြစ်ပါသည် ဒေသခံဘဏ်။ ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ: mum ဒီအစီအစဉ်ကနေအဘယ်သူမျှမအကျိုးကျေးဇူးသို့မဟုတ်အားသာချက်အားလက်ခံတွေ့ဆုံသင်ဆန္ဒရှိမည်သည့်ငွေစုငွေချေးကိုရှေးခယျြနိုငျသညျ။
ကြောင့်ကနဦးငွေပမာဏကိုပေးဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေဟာအချို့အနေနဲ့လျှောက်ထား "အခြားရွေးချယ်စရာချေးငွေ။ "အရည်အချင်းပြည့်မီစေရန်, သင်တစ်ဦးအမေရိကန်နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်အမြဲတမ်းအမေရိကန်နေထိုင်သူဖြစ်ပြီးသူသည်တစ်ဦးကောင်းကရက်ဒစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ချေးငွေ Co-လက်မှတ်ထိုးသူရှိသည်ဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်။ သင့်တစ်ခုလုံးကိုအစီအစဉ်ကိုစရိတ်ဆပ်ဖို့ပိုကြီးတဲ့ Alternative ချေးငွေသုံးနိုင်ပါသည်; မအပ်နှံသောအခါအသငျသညျတစျခုလုံးအစီအစဉ်အတွက်ပေးဆောင်လျှင်, သင်ကရလိမ့်မယ် $ 1,000 ၏ကျူရှင်လျှော့စျေး။
တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာငွေအစီအစဉ်ကိုချေးငွေပြန်ဆပ်ဖို့လိုမရသူတို့အဘို့ရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါငွေသားအစီအစဉ်ကိုပထမဦးဆုံးအစီအစဉ်ကိုငွေပေးချေမှုအထက်နှင့်ကျော်လွန်ပြီးတစ်ဦးအပိုဆောင်း $ 5,000 ငွေသားပေးချေမှုလိုအပ်သည်။ ကျောင်းသားတစ်ဦးတစ်ဦးသင်ရိုးလက်တွေ့သင်တန်း (CPT) အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုရရှိသွားတဲ့, ဒါပေမယ့်အခါအပိုဆောင်း $ 5,000 ငွေပေးချေမှုဖန်ဆင်းထားသည် ရှေ့မှာ သူတို့အလုပ်ကိုစတင်ပါ။ ထို့နောက်နှစ်လအကြာမှာသူတို့ (mum မှအကောင့် ACH debit သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းအကြွေးဝယ်ကတ်ငွေပေးချေမှုစစ်ဆေးနေမှတဆင့် mum တိုက်ရိုက်ငွေပေးချေနှင့်အတူ) 16 လအတွင်းကြောင့်ကျန်ရှိသောလက်ကျန်ငွေပြန်ဆပ်မယ့်အပတ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများအတွက် Program ကိုကုန်ကျစရိတ်အသေးစိတ်ကို
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများအဘို့, ကနဦးကုန်ကျစရိတ်, (ချီကာဂိုမြို့အနီး) US မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းဝင်းအပေါ်သင်ခန်းစာ, အော်ဂဲနစ်ထမင်းစားခန်း, ကျန်းမာရေးအာမခံနှင့်အဆင်ပြေအိမ်ယာ (တစ်ခုတည်းသောအခန်းတစ်ခန်း) ၏2ပညာသင်ကာလကိုဖုံးအုပ်ထားအရည်အချင်းများသင့်ရဲ့ကနဦးအဆင့်တွင်ပေါ် မူတည်. $ 3000 နှင့် $ 7500 အကြားဖြစ်ပါသည်။ ပိုများသောအတွေ့အကြုံရှိ, အကြီးတန်း SDs ရှေ့တက်အနည်းဆုံးပေးဆောင်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုက်ထည့်တဲ့သူကနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် တိုက်ရိုက် Track, စုစုပေါင်း program ကိုကုန်ကျစရိတ်နေသောခေါင်းစဉ်:
ကျူရှင်: $ 34,000
အခန်းတစ်ခန်းနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့: $ 7400
အခကြေးငွေ: $ 530
TM အလိုအလျောက်: $ 190
စုစုပေါင်း: $ 42,150
သင်တို့သည်လည်းပထမဦးဆုံးအတန်း၏ 2000 လအတွင်းစတင်ကျောင်းဝင်းအပေါ်ရောက်ရှိလာသည့်အခါပုဂ္ဂိုလ်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းရန် $ 8 ရရှိနိုင်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ကျောင်းသားလူငယ်များ အကြို Track စုစုပေါင်းအစီအစဉ်ကိုကုန်ကျစရိတ်မှ $ 2000 ဖြည့်စွက်အရာ, တဦးတည်းနောက်ထပ်သင်တန်းလိုအပ်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့် အမြဲတမ်းနေထိုင်သူများ ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီပက်ကေ့
အားလုံးနီးပါးကိုအမေရိကန်ဘွဲ့ရကျောင်းသားများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ဖက်ဒရယ်ကျောင်းသားကျူရှင်ဖုံးအုပ်ချေးငွေများ, အဖိုးအခ, အိုးအိမ်များနှင့်အစားအစာများ, ပေါင်းငွေသားရနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေအများစုဟာဖုံးလွှမ်းခံရဖို့တစ်ခုလုံးကိုအစီအစဉ်ကိုကုန်ကျစရိတ်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီ။ မှာ Apply ဖက်ဒရယ်ကျောင်းသား Aid ကိုအခမဲ့လျှောက်လွှာ (FAFSA).
"ဘာကိုငါ ComPro ပရိုဂရမ်နဲ့ပါတ်သက်ပြီးကိုချစ်ငါသာသေးငယ်တဲ့ကနဦးအခကြေးငွေပေးဆောင်, ငါတစ်ခု Internship get ပြီးနောက်ကြွင်းသောအရာပေးဆောင်လိမ့်မည်ဖြစ်၏။ "